Lozam-pifamoivoizana tany Manandriana 6 maty, 7 naratra mafy
Roa no voa mafy tamin’ireo 8 naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana afak’omaly hariva, tamin’ny
7ora latsaka fahefany. Tsy tana ny ain’ny iray tamin’ireo naratra mafy na efa tonga tao amin’ny hopitalin’ny faritra Amoron’i Mania ao Ambositra aza ka tafakatra 6 no maty, raha ny resaka
manokana nifanaovana tamin’ny lehiben’ny tobim-paritry ny zandary ao Manandriana. Voalazan’ity farany fa vokatry ny fitsoahan’ny kodiarana mifanitsy amin’ny mpamily no nahatonga ny loza izay
tanaty fiolahan’ny lalana anaty fokontanin’i Tsiakato Andrefana Ambatomarina, distrikan’i Manandriana. 15m any amoron-tanimbary vao tafajanona ilay fiara feno fotsimbary. Avy any Ambatofinandrahana ho any Ambositra ity fiara vaventy tra-doza ity. Saika mponina avy ao Ambositra sy Ivato ary Ambatomarina avokoa ireo tao anaty fiara ka izao tra-doza izao. Mpitatitra vary miaraka amin’ny tompona fiarabe izay mpanangom-bokatra avy any Ambondromisotra ihany koa anisan’ireo tao anaty fiara. Efa am-pelatan’ny mpitandro filaminana hanatanterahana ny fanadihadiana ombana famotorana ny mpamily izay tsy naratra raha ny vaovaon’ny zandary hatrany. Marihina moa fa maro eto Madagasikara no tsy tongan’ny taksibrosy, indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny rotsak’orana izao ka mandeha amin’ny fiara mpitatitr’entana ny mponina. Noho ny tsy fandriampahalemana koa dia zaran’ny mpamily aza mba misy namana.